Shirkadaha waaweyni waxay u midoobaan taageerida arimaha gaarka ah | War gadget
Shirkadaha tiknoolajiyada waxay u midoobaan doorbidista asturnaanta isticmaalaha
Paul Aparicio | | General
Apple Waa mar kale warar muhiim ah dhammaan noocyada warbaahinta wararka. Laakiin markan maaha sababta oo ah waxay bilaabeen qalab dhulka duminaya ama jabiyay rikoor cusub, haddii aysan ahayn wax aad u kala duwan awgood: in lala kulmo dowladda Mareykanka si ilaali asturnaanta adeegsadayaasha waxkastoo kale. Markaan idhaahdo "waxkastoo ka sarreeya" way ka wada sarreeysaa wax kasta, maadaama aysan diyaar u ahayn inay cududdooda u fidiyaan si ay u maroojiso inkasta oo ay FBI weydiiso caawimaaddooda furitaanka iPhone 5c ee toogte mas'uul ka ahaa fal argagixiso oo sababay 14 dhimasho.
Dooddu waxay hadda miiska u saaran tahay kuwa difaacaya muhiimadda asturnaanta (xogta iyo xitaa ka hortagga helitaanka kamaradda iyo makarafoonka taleefannada gacanta) iyo kuwa aaminsan in asturnaanta seguridad waa ka sii muhiimsan tahay. Laakiin maxaa la gudboon Apple? Qaar badan oo warbaahinta ka mid ah ayaa isku raacay inay tahay inay arrimaha u fududeyso sharci fulinta, laakiin ma ahan waxa ururada kala duwan ay u maleynayaan inay u istaageen xuquuqda dadka isticmaala.
1 FBI-da ayaa weydiisatay Apple inay furaan iPhone 5c toogte
2 Tim Cook wuxuu kaga jawaabey warqad furan
3 Shirkadaha waaweyni waxay u midoobeen inay doortaan asturnaanta adeegsadaha
FBI-da ayaa weydiisatay Apple inay furaan iPhone 5c toogte
Wax walba (ama ku dhowaad wax kasta) waxay bilaabmaan marka FBI-du ay gacmahooda saarto taleefanka lumiyaha toogte. Iyagoo raadinaya hab lagu helo argagixisada, waxay weydiistaan ​​Apple inay abuuraan a software gaar ah si ay u furi karaan iPhone 5c sidaasna ku heli kara macluumaadka shaqsiyeed ee suurtagalka ah ee dambiilaha.
Tim Cook wuxuu kaga jawaabey warqad furan
Jawaabtu markiiba way noqotay. Shirkadda Cupertino ayaa ka jawaabtay codsigii FBI-da ee ahaa warqad furan oo uu saxeexay Maamulaha Apple, Tim Cook, taas oo ay ku xaqiijiyeen in u hoggaansamida codsigii FBI-da ay noqonayso horudhac khatar ku ah nabadgelyada macaamiishooda oo ay saameyn ku yeelan kartosharci ka fog". Apple waxay ku adkaysatay in FBI ay waydiisatay inay abuuraan wax aad khatar u ah: a albaabka dambe. Laakiin, sida ay had iyo jeer ku ilaalin jireen Cupertino, albaabadan uma adeegsan doonaan oo keliya xoogagga sharciga, laakiin waxay noqon doontaa waqti uun ka hor inta aan si xun u adeegsan adeegsadayaashu.
Sida ku cad warqadda uu saxiixay Tim Cook, dowladda Mareykanka waxay sheeganeysaa in Apple ay aaminsan tahay software gaar ah oo loogu talagalay kiiska toogte, laakiin shirkadda tufaaxa waxay u maleyneysaa waxa isticmaalayaal badan ay u maleynayaan, in aysan macquul aheyn in la damaanad qaado in softiweerkan aan loo adeegsan doonin marin u helida aaladaha kale isla markaana abuuristeeda ay aasaas u noqon doonto tusaale qatar ah kiisaska sharci ee mustaqbalka.
Shirkadaha waaweyni waxay u midoobeen inay doortaan asturnaanta adeegsadaha
Tan iyo markii uu Tim Cook daabacay warqaddiisa furan, in yar oo ka mid ah shirkadaha tiknoolajiyadda iyo ururada ayaa ku soo biiray isaga oo dagaalka kula jira dawladda Mareykanka. Edward Snowden daabacay taxane ah Twitter taas oo uu ku xaqiijiyay in waxa Apple ay u sameysay asturnaanta ay tahay waxa ugu muhiimsan ee ay sameeyeen dadka isticmaala tobankii sano ee la soo dhaafay, isla waqtigaasna uu dhaleeceeyay Google si la mid ah u sameynin. Laakiin, wax yar kadib, Maamulaha guud ee shirkadda hadda alifbeetada ka kooban ayaa daabacay dhowr Twitter taageerida Tim Cook. Ugu dambeyntiina, RGS waxay sidoo kale daabacday bayaan ay ku xaqiijineyso inay heli karaan xoogagga sharciga, illaa iyo inta ay sameynayaan codsiyo sharci ah ayna ixtiraamayaan asturnaanta dadka isticmaala.
Shirkadaha kormeerka ee dowlada ee dib u habeynta ayaa aaminsan inay aad muhiim u tahay in laga hortago argagixisada iyo dambiilayaasha iyo in laga caawiyo fulinta sharciga iyadoo laga baaraandegayo codsiyada sharciga ah ee macluumaadka si loo ilaaliyo amniga. Laakiin shirkadaha tiknoolajiyada looma baahna inay abuuraan albaabbada tiknoolajiyada ee ilaaliya macluumaadka isticmaalaha. Shirkadaha RGS waxay wali u heellan yihiin bixinta caawinta sharci fulinta ee ay u baahan yihiin iyagoo ilaalinaya amniga macaamiishooda iyo macluumaadkooda.
Waa in la aqoonsadaa in mawduucu waa jilicsan yahay. Fikradayda, dambiilayaashu had iyo jeer waxay helaan dariiq ay ku galaan dembiyadooda oo ay u siiyaan sharci fulinta qaab ay ku helaan qalabka moobiilku ma joojinayo. Ugu dambeyntiina, sida had iyo jeer, kuwa kaliya ee wax uun lumiyaan waa kuwa isticmaala ee aan damacsanayn inay wax dambi ah galaan, waxaanan lumineynaa wax muhiim noo ah: asturnaantayada. Taasi waa sababta aan u aaminsanahay in labada shirkadood ee Apple iyo dhammaan shirkadaha taageera booskiisa ay u dhaqmayaan sidii ay ahayd. Mar haddii ay isu yimaadaan si ay uga faa'iideystaan ​​adeegsadayaasha iyo Twitter waxaa qoray dhaq dhaqaaqa caanka ah ee Edward Snowden kaliya wuxuu xaqiijinayaa muhiimada waxa Apple bilaabay.
Hadday ku weydiiyaan: maxaad oran lahayd? Ma waxaad la jirtaa Apple ama FBI?
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Shirkadaha tiknoolajiyada waxay u midoobaan doorbidista asturnaanta isticmaalaha
Waxaan falanqeyneynaa SanDisk Connect Wireless Stick, USB-ka wireless-ka ah ee loogu talagalay Android iyo IOS
Dib u eegista Acer Revo One RL85, PC mini ah oo yar "mini"